> Resource > Flash Drive > Way sahlan in la helo geeddi Cruzer Fit Flash Drive Recovery
Fadlan caawi! My Cruzer USB Fit Flash Drive Stop Working
Waxaan leeyahay ka 16GB Cruzer USB flash Fit drive. Markii aan daawaday videos qoyska on my computer, flash ka shaqeeya isla joojiyay. Waxaan isku dayay inaan u saareen iyo dib-u-xira mar kale. Waxa ay muujisay sida warqad drive ganay, oo wuxuu i weydiiyay in ay qaab. Ma jiraa Cruzer Fit software kabashada flash drive kasta ama wax kasta oo xal kale oo aan dib u heli kartaa sawiro iyo videos aan ?. Links kasta ama goobaha ama caawimo waa badan doonaa. Mahad badan
Your kiis dhab ahaantii waa dhibaato guud. Arrinta khasaaro xogta keena by formatting waa mid aad looga xumaado. Runta waxa ay tahay ma in aad u baahan tahay in aad ka welwelsan tahay waxa ku saabsan. Waxaan soo bandhigi doonaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad si, taas oo ah barnaamijka oo awood aad ka bogsato xogta ka Cruzer Fit flash drive fudayd. Tani qalab si sahlan oo degdeg ah ayaa kaa caawin kara arrintan Cruzer Fit Flash Drive arrinta soo kabashada xogta hor intaadan go'aansan inaad qaab flash ah.
Waxaad version tijaabo ah oo xagga hoose ka heli kartaa, fadlan dooro version saxda ah ee computer.
Guide Quick ee Cruzer Fit Flash Drive Recovery
Wondershare Data Recovery Jirsado Cruzer Fit Flash Drive Data Recovery galay qasabno yar. Hadda aynu u qaban la version Windows, Mac users aad u raaci karaan tilmaan la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Download Wondershare Data Recovery oo ku xidh on your computer. Geli aad Cruzer USB flash Fit drive galay your computer kadibna aan biloowno barnaamijka dib u soo ceshano xogta ka Cruzer Fit flash drive.
Sida image hoos ku soo bandhigay, waxaad arki doontaa interface ah 3 hababka soo kabashada iyo mid "furmaya Recovery" doorasho. Halkan waxaad ka dooran kartaa "File lumay Recovery" marka hore.
Tallaabada 2 Si aad u soo kabsado xogta ka Cruzer Fit flash drive, waxa aad xulan doonaa drive adag ee aad Cruzer USB flash Fit drive oo guji "Start" si ay u bilaabaan u baar.
"Enable Deep Scan" doorasho waa la heli karaa sidoo kale. Waxaad isku dayi kartaa hab tani waxaa la scan caadi ma hesho files doonayo.
Tallaabada 3 The files aad Cruzer Fit flash USB drive oo dhan lagu soo bandhigi doonaa qaybaha sawirka kadib, sida "Graphic", "Email", "Video", iwm
Waad sheegi kartaa haddii faylasha aad doonaysid in aad ka soo kabsado ayaa laga helay ama aan ka magacyada file. Markaas calaamadee faylasha soo xulay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya. Fadlan dooro meel on your computer si ay u sii si looga fogaado overwriting xogta.